Iskuul ka badalida Dagmada dhaxdeeda | Bloomington Public Schools - District #271
Home / Iskuul ka badalida Dagmada dhaxdeeda
Iskuuladka Bloomington iyo markad rabtid in aad iskuul badalatid
Walidiinta iyo Ilalayasha dagan Bloomington haday doonayan in ay badashtan iskuulka sanadka soo socda aan waa inay buuxiyan arjayga lagu codsanayo badalida. (Shacigeda halkan ka eeg 503.2 Arday qorida/badalida School Board Policies & Regulations .)
Codsiga waa inad soo gudbiya tariqaha hoos ku qoran waxayna kula duwan yihiin fasalada, waana inad online ahan u soo buuxisa oona usoo gudbisata. Codsiga onlineka ah waxa uu furnanaya kaliya tariqaha hoos ku qoran. Hadii aadan awoodin inad online ku soo buuxsato, fatlan la xariir iskuulka aad adin ayagana cawinad waydiso. Waxaad kaloo awood inad soo dabacatid oo soodirsantid halkan ayaadna ka helaysa: Elementary Paper Copy iyo Secondary Paper Copy.
Walidinta iyo Ilalayasha waxa lugu dhiiri galinaya in ay codsadan waqti hore si shaqadooda loo bilawo. Iskuul warajinta waxay ku xirantahay siduu iskuulka aad rabtid boos oga bananyahay. Markad codsatid kadib waxad iskuulka ka helaysan email kuu sheegaysa goortay tahay in lagula soo socodsin doono markay shaqada bilawato.
Hadii aad qabtid wax su’aal ah, fadlan la xariir mamulaha iskuulka.
Xiliga aad codsan kartid iskuul badalida
Wuxuu bilawanaya codsiga iskuul badalida sanadka 2013-2014 October 23, 2012. Tariqaha kale oo lasii fahfahiyey waa lasoo qori dona markay hoosha dhamato.
Gooraha ay furman sanadka 2013-2014:
Oct. 23 - Dec. 1, 2012
Dec. 2, 2012 - Feb. 1, 2013
Feb. 2 - June 1, 2013
Waladinta waxaa lasoo wargalina labo isbuuc kadib markay arjiga dhiibten, kadib markay xiranto isqorida.